Udiri nke Kerch: njirimara na atụmatụ dị mkpa | Network Meteorology
Otu n'ime eriri nke oke osimiri nwere nnukwu usoro dị mkpa bụ Kerch Strait. Ebe ọ bụ na nsogbu a na-enye oke mkpa, ọ bụ ya kpatara ọtụtụ esemokwu dị n'etiti Ukraine na Russia. N'etiti ebe ndị a, enweela ọtụtụ ihe mere n'ihi onye bụ onye nwe mpaghara a dị oke mkpa. Ihe ọhụrụ mere na 2014 na-egosi oke esemokwu dị n'etiti mba abụọ ahụ, ọkachasị ebe Russia jikọtara agwaetiti Ukraine nke Crimea.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mkpa dị mkpa yana iwu ndị emerela na Kerch Strait.
1 Panorama nke Kerch Strait
2 Omume na Kerch Strait
3 Owuwu nke uzo Kerch
Panorama nke Kerch Strait
Osimiri Kerch jikọtara Oké Osimiri Azov na Oké Osimiri Ojii. Nke a bụ njikọ dị mkpa na igwe na-ejikọ Russia na Mediterranean. N'ihi nsogbu a, Russia nwere ike isi na Mediterenian were ihe enyemaka. Ihe owuwu nke Kerch Strait Bridge bụ otu n’ime ihe ga-eme ka mmekọrịta dị n’etiti Moscow na Crimea jikọtara ya. Nke a bụ n'ihi na akwa a gafere mmiri mba ụwa. A mara ọkwa na a ga-ekewa akwa mmiri a iji kewaa ókèala ahụ na netwọkụ njem nke Russia yana, n'ikpeazụ, a maara na ọ na-enye njikwa ikpeazụ nke ụzọ ụgbọ mmiri niile dị na ma na Oké Osimiri Azov.
Russia ejirila Kerch Strait Bridge mee ngwa agha na nke akụ na ụba. Ebumnuche gị maka inwe ike ịkwado usoro iwu maka akwa a bụ na ọ na-enye ihe nchekwa. Maka nke a, ndị ọchịchị Russia nyefere ndị njem ụgbọ mmiri na-agafe n'okpuru akwa a ogologo nyocha. Nyocha ndị a, ọtụtụ oge, nwere ike were ọtụtụ ụbọchị. A na-eburu ụgbọ mmiri ndị a ụzọ ụgbọ mmiri na Ukraine na Oké Osimiri Azov.
Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara ndị isi obodo Ukraine ji na-ebo Russia ebubo na ọ na-ekpuchi ha akụ na ụba maka uru nke ọdụ ụgbọ mmiri Russia. Otu n'ime mkpesa ndị Ukraine nwere bụ na a na-egbochi ọdụ ụgbọ mmiri nke Mariupol.
Omume na Kerch Strait
Na 2018 na November 25 o nwere ihe mere na Kerch Strait. Nke a mere mgbe ụgbọ mmiri Russia ji ụgbọ mmiri 3 nke ndị agha Ukraine. Nke a mere ka ndị ọrụ nchekwa gọọmentị Federal nke Russia katọọ ụgbọ mmiri ndị batara na mpaghara Russia na-akwadoghị. Site n'ime nke a, ha mebiri ókè mba ha ebe ọ bụ na ha arịọghị ikike ka ha gafere Kerch Strait.
N'ihi ihe a mere na akụkụ nke Ukraine, Russia gbara egbe ma jide ụgbọ mmiri ndị Ukraine n'akụkụ ụsọ mmiri nke Crimea. Mgbe ha chụsịrị ogologo oge, ndị agha pụrụ iche weghaara ụgbọ egbe abụọ na otu ụgbọ mmiri. Ihe ruru mmadụ isii so na ndị ọrụ Yukrain merụrụ ahụ n’oge agha ahụ. N'otu ụbọchị ahụ, Onye isi ala Ukraine bịanyere aka na iwu iji tinye iwu agha ma kwadoro ya na nzuko omeiwu n'echi ya. Ebe ọ bụ na ọnọdụ nke nsogbu nke ihe mgbagwoju anya, ihe omume nke ụdị a gara n'ihu ruo Russia rịọrọ ka a nwee nzukọ iji kwado udo na nchekwa mba ụwa.
Owuwu nke uzo Kerch
Iji jikọọ Oké Osimiri Ojii na Azov Sea nke kewara Kerch Peninsula na Taman Peninsula, e wuru Kerch Bridge. Peninsulas abụọ ahụ bụ nke Russia taa ebe ọ bụ na Crimea bụ nke Ukraine ruo Machị 2014. Akwa a nwere ọtụtụ akụkọ ntolite kemgbe ndị German gbalịrị ibuli elu na Agha IIwa nke Abụọ mana n'ikpeazụ ndị Russia enweela ihe ịga nke ọma. Mpaghara e wuru akwa ahụ dị warara, sọsọ naanị kilomita ise.
N’afọ 1944, a rụrụ àkwà mmiri ma o nweghị ike idi ụdị oyi ọ bụla, nke yiri nke ice ahụ bibiri. E nwere ugbua na May 2015 bụ mgbe mwube nke àkwà mmiri ahụ malitere ma maka ụgbọ ala ma maka njem ụgbọ okporo ígwè. N’okporo mmiri a dị ihe dị ka kilomita iri na itoolu n’ogologo, ebe ọ bụ ụzọ njem 19 kilomita.
A na-akatọ ụfọdụ ọrụ ngo a n'ihi ọkachasị ọnọdụ obodo dị n'ebe ahụ. A na-ekwukwa na agbahapụ ọrụ ahụ kemgbe okwute ahụ bụ okwute bụ ụdị nzu nzu ma nwee ọtụtụ oghere. Nke a na - eme ka àkwà mmiri ahụ ghara ịnagide ya, ọ na - ekwupụtakwa na emebeghị nchọpụta miri emi nke ọma. Ndị na-agbachitere ọrụ a bụ ndị na-agbachitere na enweghị ike ịme ya n'enweghị nyocha zuru oke. A na-enyocha mpaghara niile ma ule nyocha ma ọ bụ nke siri ike ka emere na ikpo. Ekele maka ule ndị a, a kwadoo ntọala ahụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Kerch Strait.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kerch Strait